Amazon Echo Connect: Sidee ayay ula shaqeysaa Echo
Amazon Echo Connect: Sida Loo Shaqeeyo Echo
Kordhee taleefanka codka ee codka ah ee telefoonkaaga guriga
Amazon Echo Connect waa qalab Echo ah oo isticmaalaya khadka taleefanka gurigaaga (landline ama VoIP) adiga oo isticmaalaya Amazon Echo si aad u bedesho telefoonkaaga guriga si aad uhesho telefoonka gacanta. Echo Connect waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka jawaabto wicitaanada, wicitaanada sameyso, iyo inaad farriimaha ka soo qaadato khadka taleefanka gurigaaga oo aan gacmo-bilaash ah isticmaalin Alexa .
Waa maxay Amazon Echo Connect uu qaban karo
Wicitaanada taleefoonada ka jawaab: Echo Connect, waxaad ka jawaabi kartaa wicitaanada soo galaya taleefanka gurigaaga adoo isticmaalaya codkaaga oo kaliya. Marka la isku duubo barnaamijka Alexa-ka ee casrigaaga, Connect waxay xitaa ku dhawaaqi kartaa qofka soo wacaya si aad go'aan uga gaarto inaad jawaab celin ama diidid wicitaanka. Alexa wuxuu isticmaalaa liiska xiriirka ee casrigaaga si aad u aqoonsatid dadka soo wacaya.
Samee wicitaanada taleefoonka: Amazon Echo Connect waxay kuu ogolaaneysaa inaad wacdo taleefan si fudud adoo waydiiso Alexa inaad wacdo qof kasta oo ku jira liiska xiriiriyaha telefoonkaaga-aanad raadineynin liiska xiriiriyahaaga lambarka telefoonka loo baahan yahay. Sababtoo ah Connect waxay isticmaashaa khadka taleefanka gurigaaga ee la xidhiidha qalabkaaga Echo ee muhiimka ah, lambarka taleefanka gurigaagu wuxuu ku yaalaa lambarka aqoonsiga ee qofka aad soo wacayso, sidaas awgeed isagu ama iyadu wuu ogyahay inaad tahay adiga.
Ka faa'iideysiga xirfadaha Alexa: Sida xirfadaha Alexa ee cusub lagu daro, waxaad dalban kartaa Alexa inaad ku darto xirfadahan cusub si aad u kordhiso waxyaalaha aad ku sameyn karto Echo Connect.
Gudaha Amazon Echo Connect
Echo Connect waxay qiyaasaan 5.1 inch ilaa 3.5 inji oo ay ku jiraan 1.2 inji. Wuxuu miisaankiisu yahay 4,5 wiqiyadood.
Echo Connect waxay ku yimaadaan fiilo yar oo USB ah oo loogu talagalay xiriirka korantada, telefoon caadi ah oo loogu talagalay jaakadaha telefoonka gacanta, iyo RJ11 kala-saaraha.
Isgaadhsiinta Isku- xirka Wi-Fi ee labada isku-dhafan wuxuu isku-dhejin karaa Connect-kaaga adigoo adeegsanaya internetka fudud.
Echo Connect waxay u baahan tahay adeeg telefan oo firfircoon (adeega degaanka ama VoIP) iyo qalab Echo oo ku haboon . Connect waxay ku habboon tahay jilaalka koowaad iyo kan labaad ee Echo iyo Echo Dot , Echo Plus , Echo Show , iyo Echo Spot. Adeegga taleefanka gurigaaga ee firfircoon waa inuu noqdaa adeegga telefoonka caadiga ah ama adeegga internetka (oo loo yaqaano Voice over Internet Protocol ama VoIP).
Sida loo dejiyo Amazon Echo Connect
Dejinta cusub ee Amazon Echo Connect waxay qaadataa dhowr tallaabo oo degdeg ah:
Isku xir Amazon Echo Connect adigoo isticmaalaya il awood ah.
Haddii aad haysatid telefoonka caadiga ah, waxaad isticmaashaa xargaha telefoonka ee ku xiran si aad u xirto Echo Connect si aad u geliso jeebka gacantaada. Haddii adeegga telefoonka gurigaagu yahay VoIP, app Alexa ayaa ka caawin doona tallaabooyinka soo socda.
Fur barnaamijka Alexa ee casrigaaga ( Android ama iOS ) iyo saxiix.
Haddii adeeggaaga telefoonka guriga uu yahay VoIP, app Alexa ayaa ku dhejin doona Echo Connect oo kaa caawinaya talaabooyin gaar ah oo looga baahan yahay inaad ku soo jiidato adeegga gurigaaga ee VoIP adigoo u maraya Echo Connect.
Isku xiri xidhiidhadaada Echo Connect ee app Alexa.
Sida loo helo Amazon Echo Show iyo Run
Top 5 Website-yo loogu talagalay Filim Dhamaystiran oo buuxa
Talooyin Sawirada Sawirada Goobta Isticmaalka
Maxay Tahay Micneheeda?
Cinwaanka IP-ga ah
Waa maxay Roku Waa & Sida loo Isticmaali karo
Sida Loo iibiyo Your casriga Android casriga ama casriga
The 10 Apps Best Free for Android
Sida Loo-shaqeeyahaaga Nidaamkaga Loogu Jiro Deriskaaga
Talooyin, Tricks, Talooyin loogu talagalay Bravely Default on Nintendo 3DS
Sida loola wareegi karo YouTube
New Minecraft: Warqadaha Muujinta Muuqaalka!
CrashPlan ee Ganacsiga yaryar: Safar Dhameystiran
Maxaa Loogu Dhaafay Dhabarka?
Amazon Cloud Reader: Maxay tahay iyo Sida loo Isticmaali karo
Maxay I Leedahay I / O Ports on Laptop?
Sare 802.11g Routers Mobile Travel
Waa maxay Muuqaalka Voicemail?
Hagaha Isticmaalida Xiriirada HTML-ga ee ka baxsan
Isticmaalida JailbreakMe JailBreak iPhone & Itaaladaha kale ee Ikhtiyaari
Sida loo kala sooco Farriimaha Yahoo! Boostada
Viber 4.0 Cusbooneysiinta
12 Talooyin Instagram iyo Tricks Adigu Ma Ogtahay
Wax kasta oo ah Gamer waa inuu ka ogaado E3 2016
Sida loo dejiyo Warqadaha cusub ee Macluumaadka ee Mac OS X Mail
Outlook.com - Adeegga Boostada lacag la'aanta ah
Doorashada Istaraatiijiyada Twitter
Waa Maxay Foomka PEM?